Yintoni ekufuneka uyazi malunga ne-Semalt
Namhlanje, kunzima ukufumana umnini wesayithi onokuthi angeva ngeSemalt. Kuba ngendlela enye okanye enye, abantu kufuneka bajongane nokwenza i-SEO. Ukunyusa iwebhusayithi kwi-injini yokukhangela iba sisihloko esixoxwa kakhulu. USemalt uzimise njengenkokeli ekukhuthazeni iwebhusayithi kwaye sele ebonakalisa ukuphakama kwayo kule ndawo isithuba seminyaka elishumi.
La ayingawo amazwi angenamsebenzi, zonke iinyani ziqinisekisiwe sisalathiso sobungakanani bokugqitywa kweeprojekthi. Amakhulu abathengi abhala ingxelo entle malunga nokusebenzisana nathi kuba iinkampani zabo ziqale ukuba nempumelelo. Bonke abakhuphisana nabo bashiywe kude ngaphandle kwithuba elinye lokufumana isikhundla sabo kwi-injini yokukhangela. Kuyacaca ukuba ukwenziwa kwe-SEO akunakwenzeka ngaphandle kweSemalt, oku kukhethekileyo kwethu apho iingcali ezikumgangatho ophezulu zithatha uxanduva. Ngaphandle koko, asinalo ixesha lokuphumla kwizindlu zethu zokuphumla, siphucula iindlela zethu mihla le ngokunikeza abathengi iitekhnoloji ze-SEO ezintsha. Siyavela, ishishini lakho liyaphuhla nathi.
Kuya kufuneka sinike iqela lethu iminikelo, equka abaphathi abanamava, iingcali ze-IT, iingcali ze-SEO, abakhupheli kunye nabaphathi bezentengiso. Sinokukuqinisekisa kwangoko, akukho gumbi labantwanandini kwaSemalt. Ingcali nganye inamava abanzi ekukhuthazeni i-SEO, ukwazi ukucinga ngobuchule kwaye uhlala egxile kwimpumelelo.
Jonga amatyala okwenyani avezwe kwiwebhusayithi yethu. Uya kuchukunyiswa linani leendawo esikhuphe kuzo iingxaki ezinkulu. Sisebenza ngayo nayiphi na iwebhusayithi kwaye siyabagcina ekuweni okungafanelekanga. Mhlawumbi, abantu abaninzi banomdla kubuchwepheshe kunye nomgaqo womsebenzi wethu. Eli nqaku liza kukuxelela ukuba sikwazile njani ukuba kwisiphelo esiphakamileyo, kwaye kutheni uSemalt kuphela kwenkampani eqinisekisa impumelelo yakho.
Igama elithi SEO lisetyenziswa ukubhekisa ukuphuculwa kwewebhusayithi ngenxa yeemfuno zeenjini zokukhangela. Umzekelo, emva kokudala isixhobo esikwi-intanethi esenzelwe ukuthengisa into ethile okanye inkonzo ethile, kuya kufuneka ukuba kuziswe ulwazi ngayo malunga nenani eliphezulu lamalungu abaphulaphuli ekujoliswe kuwo.
Nokuba abo basebenzisi bajonge ezo mveliso okanye iinkonzo azizukuzibona kwiziphumo zokukhangela de iwebhusayithi ibe kumaphepha angaphambili enjini yokukhangela. Ungafezekisa oku nge-SEO optimization. Ngenxa yokuba abathengi baya ngokuya bathenga iimpahla kunye neenkonzo kwi-Intanethi, naliphi na ishishini ngoku lifuna ukunyusa ukukhangela.
Zonke iindlela ezisetyenziselwa ukukhuthaza i-SEO yewebhusayithi kuthungelwano lwehlabathi zahlulwe ngeendlela zangaphandle nangaphakathi. Kwimeko yokuqala, imisebenzi yenziwa kusetyenziswa izixhobo ze-intanethi zomntu wesithathu, yesibini - ngaphakathi kwiwebhusayithi. Eyona njongo iphambili yokwenza umsebenzi wangaphandle kukupapasha imixholo yayo ngaphandle kwewebhusayithi yecandelo. Oku kubonelela ngokugcwala kwezithuthi kunye nomthombo owamkelekileyo wonxibelelwano kwiwebhusayithi ekhuthazwayo, kunye negalelo kuphuculo lwezikhundla kwi-injini yokukhangela. Izikhokelo eziphambili zolu hlobo lwentengiso:
Ukupapashwa kwamaphepha oshicilelo kunye namanqaku kumaqonga e-intanethi abanye abantu.
Ukusebenza kwe-SEO kwangaphakathi kwewebhusayithi kubandakanya ezi ntlobo zomsebenzi zilandelayo:
ukudala umxholo owahlukileyo kunye nomgangatho ophezulu;
Ukukhetha amagama aphambili kwaye uwathumele ngokulinganayo kwizicatshulwa.
Yintoni uSemalt ayinikezayo
Siqulunqe uluhlu lwamanyathelo ajolise ekwandiseni ukugcwala kwendawo yakho kunye nokubonakala kwayo. Le misebenzi emibini ifanelekileyo ichaza ukunyuswa kwe-SEO. Ukonyusa ukusebenza kakuhle, izisombululo ezizodwa zenziwe- I-AutoSEO kunye ne-FullSEO. Le yimikhankaso ekhethekileyo apho unokufumana iziphumo ngexesha elifutshane kakhulu. Ngapha koko, siya kubajonga ngokucokisekileyo, kodwa ngoku makhe siqwalasele ukuba kwenzeka ntoni uSemalt. Nazi iingcebiso zethu eziphambili:
ulungiselelo lwe-enjini yokukhangela;
Ividiyo yokukhuthaza ishishini lakho.
Iphulo le-AutoSEO nguSemalt
I-AutoSEO lininzi lamanyathelo athathiweyo ukubeka iwebhusayithi yakho kwindawo ephezulu ye-injini yokukhangela. Kubaluleke kakhulu ukuqonda le ndlela ngokuchanekileyo. Le ayisiyiyo imilingo yomlingo, kodwa iintshukumo ezinenjongo zenkampani yethu ngaphakathi kwesakhelo se-SEO-optimization. Kholwa, ubukho bepani akuqinisekisi isuphu emnandi, ke umsebenzi udityaniswa ziingcali zeengcali ezahlukeneyo. Iphulo le-AutoSEO linokuba nemveliso kuphela ngokusebenzisana nomthengi kunye neqela likaSemalt. Nantsi into i-AutoSEO ebandakanya:
Ukukhetha uninzi lwamagama aphambili;
Ngoku yiba nomonde kwaye ujonge ukuba ijongeka njani ekusebenzeni. Konke kuqala ngobhaliso kwiwebhusayithi yethu. Emva koko, yonke into yenziwa ngumhlalutyi wesiza, ojonga ngononophelo ukwakhiwa kwewebhusayithi ngokwemigangatho ye-SEO. Ufumana lonke ulwazi olufanelekileyo ngohlobo lweengxelo olunoluhlu lweempazamo ekufuneka zilungisiwe. Ngokusekwe kuhlalutyo, injineli ye-SEO imisela amagama afanelekileyo anokunyusa ukugcwala kwiwebhusayithi.
Inyathelo elilandelayo kukufaka amakhonkco e-intanethi kwizibonelelo ezahlukeneyo ze-Intanethi. Umxholo kufuneka ungqinelane nonxibelelwano kwaye uphathe ixabiso le-semantic. Inkqubo ihlala ibekwe esweni ngumphathi wethu, lowo ulandelela isikhundla seekhonkco kwi-injini yokukhangela. Awuyi kukhathazeka malunga nento, yonke into iphantsi kolawulo olupheleleyo kulo lonke eli phulo. Izixhobo zonxibelelwano ezikwi-Intanethi zikhethwe ngokuchaneka okukhulu, ke ngoko ukubakho kokuluhlu olungenanto akubandakanywa.
Ngokufikelela kwi-FTP (iProtokholi yokuGqithisela iifayile), iingcali zeSemalt zenza utshintsho oluthile oluboniswa kwangoko kwingxelo yewebhusayithi. Olu tshintsho lukhokelela kwinkqubo yokwenza iwebhusayithi. Uxanduva lukaSemalt okweli nqanaba libandakanya ukuvuselelwa kwinqanaba lemihla ngemihla, ngokungenisa amagama aphambili ahambelana nomxholo. Inzuzo ye-AutoSEO kukuba iphulo liqhutywa ngokubandakanyeka okuncinci okanye akukho kubasebenzisi, kodwa uhlala usesikhathini nayo yonke into eyenzekayo. Iphakheji yenyanga ye-AutoSEO ixabisa $ 99.
Ukuze uqonde ngcono le nkqubo yokusetyenziswa kwe-SEO, sikunika ukuba uziqhelanise neenkqubo ze-FullSEO, ezijolise ekwandiseni ukulinganisa iwebhusayithi kwi-injini yokukhangela. Umahluko nge-AutoSEO kukuba isiphumo sifezekiswa ngexesha elifutshane. Isiseko kukusebenza ngaphakathi nangaphandle, okwenziwa yingcali ye-SEO. Ngenxa yoko, umkhankaso we-FullSEO awuyi kuvumela kuphela ukuthatha isikhundla esikhokelayo kwicandelo lokuthengisa, kodwa kunye nokuqhubela abakhuphiswano kude kubambeke.
Iimpawu zomkhankaso we-FullSEO
Umkhankaso we -SESEO uqala ukusuka ngexesha ubhalisa ngalo. Uhlalutyo olucokisekileyo lwesakhiwo sewebhusayithi lwenziwa, ngokukhutshwa kwengxelo elandelayo. Emva koko, ingcali ye-SEO yenza isisombululo semantic yendawo yakho, ikhangela uqwalaselo kwaye ichonge eyona nto iphambili. Ngenxa yohlalutyo, zonke iimpazamo ezifuna ukulungiswa ukuze kuqhubeke inkqubela phambili zichongiwe. Ke lithuba lokuchaza amagama afanelekileyo ukwandisa ukugcwala. Ke, indawo iyenziwa iphuculwe ngaphakathi kuwo onke amabakala. Emva kokungena kwi-FTP, ingcali iya kwenza utshintsho oluchaziweyo kwingxelo.
Elinye inyathelo liya kuba kukwenziwa ngaphandle. Iingcali ze-SEO ziya kubeka amakhonkco kwimithombo ye-niche ebonisa ubungakanani bomxholo wakho. Ixesha elingaphezulu, ezi zixhumanisi ziya kuqala ukuzisa iziphumo ezifanelekileyo kwiwebhusayithi. Kwi-akhawunti ye-Semalt, kukho inani elikhulu leendawo eziqinisekisiweyo onokusebenza nazo ngokuvelisa, zonke izibonelelo zokuphumelela ngempumelelo kwendawo yakho. Iphulo elipheleleyo le -SESEO liphantsi kokubekwa esweni kwengcali rhoqo, kukho uhlaziyo lwamaxesha ngamagama aphambili, ukuba luyafuneka. Ukukugcina usesikhathini nazo zonke iinguqu kunye nokukhula kumgangatho wesiza, iingxelo ezineenkcukacha ngemeko yewebhusayithi yakho kwi-injini yokukhangela zihanjiswa. Le nkqubo ihambahamba ngewotshi, ngoko ke akunakwenzeka ukuba uphulukane nawo nawuphi na umzuzu obalulekileyo.
Ngamanye amaxesha kwenzeka ukuba ngesizathu esithile kuya kufuneka umise ukukhuthaza i-SEO. Kule meko, iGoogle ihlala isusa yonke i-backlinks kwindawo yokugcina idatha emva kwexesha. Izikhundla ziya ngokwemvelo ziqale ukuwa ngokukhawuleza, kodwa ungakhathazeki kanzima, ziya kuhlala zikwimeko ethile. Esi sikhundla siya kuba ngaphezulu kakhulu kuneso sasingaphambi kokuqhuba kwephulo le-FullSEO. Ngokubanzi, nayiphi na indlela yokusebenza ye-SEO ngumntu ngamnye, ngoko kunzima ukufumanisa ixabiso lephulo le-FullSEO ngaphambi kokuba ingcali ye-SEO ibukele iwebhusayithi yakho ngokweenkcukacha.
I-Semalt ikwabonelela ngokusebenza kwe-SEO ngokusebenzisa ii-Analytics. Ngamanye amagama, yinkonzo yokuphicothwa kwewebhu yewebhu ngokudalwa kwengxelo eneenkcukacha. Qaphela ukuba ukongeza kuphicotho lwendawo ekugxilwe kuyo, luhlalutya indawo zokhuphiswano, ukuqokelela amagama aphambili okwenza ubungakanani besiseko sewebhusayithi, kunye nokwakha uluhlu lweempawu zokhuphiswano. Uhlalutyo lubonelela ngokulandelayo:
isindululo samagama aphambili
Ukuqokelelwa kweenkcukacha zohlalutyo kuqala kamsinya nje ubhalisa kwiwebhusayithi yethu. Oku kwenzeka ngokuzenzekelayo, qho xa ugqiba ukuqokelela idatha yakho, ufumana ingxelo ebonisa ngokucacileyo imeko yokwenyani yewebhusayithi yakho. Iindawo zokhuphiswano zabahlalutyi ziyahlalutywa ngokunjalo, kwaye nawe ufumana lonke ulwazi malunga nesikhundla sabo. Imigangatho ye-SEO ithathelwa ingqalelo ngelixa usenza isakhiwo sendawo, ngoko ke kufuneka ufumane iinguqulelo ezihlaziyiweyo kumiselo lwakho ukuba ufuna njalo.
Ukuba sele unayo iakhawunti efanelekileyo, unokongeza nasiphi na isixa seziza kwikhabhinethi yakho. Zonke iisayithi ziya kuhlalutywa ngokuchanekileyo. Uhlalutyo lokuqala lubonisa awona magama aphambili onokuwasebenzisa. Inkqubo ukhetha kuphela ezifanelekileyo kumagama aphambili komxholo. Oko kukuthi, onke amagama aya kuba negalelo elibonakalayo ekukhuleni kokuya kwisiza. Unokucima okanye wongeze amanye amagama aphambili ngokubona kwakho.
Ukulungeleka kukuba sihlalutya indawo kwaye sijonge inkqubela yayo malunga nexesha. Kubalulekile ukuqokelela ulwazi malunga nabantu okhuphisana nabo. Uhlala uyazi yonke into eyenzekayo kwiisayithi zabo, kwaye i-Analytics ikuxelela manyathelo ekufuneka athatyathwe ukugqitha umntu okhuphisana naye kwinjini yokukhangela. Ungasebenzisa isiCwangciso seNkqubo yokuSebenzisa (API), oku kukhetheka kakhulu phakathi kwabasebenzisi kuba idatha idityaniswa ngokuzenzekelayo, ivumela ukubeka iliso kuhlaziyo ngalunye. Kukho iipakethi zerhafu ezintathu ezikhoyo kolu luhlu lweenkonzo:
I-STANDARD - $ 69 ngenyanga (amagama angama-300 aphambili, iiprojekthi ezi-3, imbali yesikhundla seenyanga ezi-3);
UPHANDO-I -99 yeedola ngenyanga (i-1 000 yamagama aphambili, iiprojekthi ezili-10, imbali yobudala be-1);
Ekuphuhlisweni kweWebhu, uSemalt ucebisa isisombululo esibanzi esibonisa uphuhliso olupheleleyo lwayo nayiphi na indawo yentengiso, kunye nokuyila izinto zalo:
ukudityaniswa nezicelo zomntu wesithathu;
Inkqubo yokuLawulwa kweMxholo;
iimodyuli ezikhethekileyo ze-e-commerce;
Into enyanzelekileyo kwizikim zentengiso eziphunyeziweyo ngelixa kusungulwa iiprojekthi zentengiso ezinkulu ze-Intanethi yividiyo eshwankathela ubunyani kunye nezibonelelo zenkampani entsha. Njengenxalenye yenkonzo "yokuPhakanyiswa kweMveliso yeVidiyo" uSemalt ucebisa ngeendlela ezimbini zokwenza ezo vidiyo:
ngesigqibo somntu ngamnye (ixabiso libalwa ngokwahlukeneyo).
Utshintsho kumsebenzi wentlawulo lwenziwa kwiinkcazo zeephakheji zerhafu, ngokucofa kwindawo ethi "Bhalisa". Ukuthenga iphakheji yerhafu kunokuveliswa kuyo nayiphi na imali yelizwe. Isikhethi esitshintshiweyo sikwindawo ephezulu yefom yokuhlawula.
Emva kwayo yonke le nto ingasentla, kunzima kakhulu ukuthandabuza ukusebenza kwe-SEO yokwenza ngeendlela zeSemalt. Mhlawumbi kuvela imibuzo eyongezelelweyo kuba inqaku alinakukwazi ukugubungela yonke i-nuances yomcimbi onzulu kangaka. Ke, kungcono ukunxibelelana nenkampani ngaphandle kokulibazisa. Kungekudala uSemalt uva kuwe, ngokukhawuleza uya kuba sisityebi. Silinde wena!